Kordhinta: Maalgelinta Ku Bilowga Xashiishadda • Daroogada Inc.eu
Kordhinta iibka xashiishka inta lagu gudajiray cudurka faafa ee coronavirus iyo sharciyeynta sii kordheysa ee xashiishadda ayaa dhalinaysa xiise cusub oo laxiriirta bilowga xashiishadda.
Waxaa ku sii kordhaya isticmaalka xashiishadda inta lagu gudajiro Cudurka faafa ee COVID-19, ganacsatada warshadaha iyo maalgashadayaasha ayaa isu diyaarinaya xitaa koror weyn oo dhanka warshadaha ah maadaama ay sii fideyso sharciyeynta xashiishadda isla markaana dhaqaalaha Mareykanka uu dib u furmayo.
1 Tiknoolajiyada xashiishadda
2 Soo celi sicirka saamiyada xashiishadda
Ku bilaabashada farsamada xashiishkaoo ay ku jiraan kuwa karti u galiyay bixinta haramaha ayaa helay kor u kac weyn intii lagu jiray faafida. Aad iyo aad u tiro badan oo Mareykan ah ayaa ka faa'iideystay adeegyadan, taasoo dhalisay xiisaha maalgashadayaasha shirkadaha bixiya ama taageera geedi socodka qaybinta dhijitaalka oo dhan. Laga soo bilaabo qalabka maaraynta dalagga illaa u hoggaansamida iyo barnaamijka kombuyuutarka ee ecommerce ee warshadaha wali waa aag sharci ah oo heer federaal ah.
Ganacsatada Cannabis waxay yiraahdaan waxay u baahan yihiin inay si dhakhso leh wax uga qabtaan oo ay dhisaan magacyadooda ka hor intaanay si buuxda u sharciyeynin Mareykanka heerarka ciyaarta - nidaam dad badani filayaan inay bilaabmaan sanadkan.
Soo celi sicirka saamiyada xashiishadda
Dhamaan waa la sheegay, maalgashadayaashu waxay in ka badan $ 2018 bilyan geliyeen bilaabista tikniyoolajiyadda xashiishka ee Waqooyiga Ameerika tan iyo 2,5. Xiisahaas ayaa yimid iyada oo saamiyada shirkadaha xashiishka ee sida sharci darrada ah looga ganacsado - inbadan oo ka mid ah ay ku qoran yihiin Kanada si looga saaro sarrifka saamiyada Mareykanka - waxay billaabayaan inay soo kabtaan ka dib iibintii foosha xumaa ee 2019.
saamiyadakaydka xashiishkabeerista cannabiscannatech
Taxanaha taxanaha ah ee soosaare Robert Oey iyo agaasimaha Arjen Sinninghe Damsté ayaa iftiiminaya taariikhda the